A na-ewepụta Xiaomi Mi 9 SE na Spain | Androidsis
Xiaomi kwuputara ya na Mọnde ma emesịa bụrụ eziokwu. A na-eme Xiaomi Mi 9 SE na Spain. Ikpeazụ February a ekwentị si adịchaghị elu site na ndị nrụpụta China. Enweghị ozi gbasara mmalite mba ekwentị nke enyere na nkwupụta ya. Ọ bụ ezie n’izu ole na ole gara aga ka emere ka ọ pụta ìhè na ọ na-aga Abia n'isi nso ná mpụga China.
N'ikpeazụ oge eruola, na mwepụta nke a Xiaomi Mi 9 SE na nzuzo na Spain. Ngwaọrụ nwere ihe niile ga - abụ ihe ịga nke ọma ọhụrụ maka akara China. Site na nhazi dị ugbu a, ụdị nkọwa dị mma, nwere nnukwu ese foto yana ezigbo ego.
Anyị na-achọta ụdị abụọ dị iche iche nke Xiaomi Mi 9 SE. Onye mbu biara na ikike 6/64 GB, ma erere ya na ụlọ ahịa nke akara China, yana Amazon. A na-arụ ọrụ ụdị ekwentị a na ọnụahịa nke euro 349 na oru na-acha anụnụ anụnụ na nwa.
N'aka nke ọzọ, anyị nwere ụdị nke ekwentị nwere 6 GB RAM na 128 GB nke nchekwa. N'okwu a, anyị ga-echere otu izu maka ịtọhapụ ya. Ebe ọ bụ na ọ bịaghị ruo Eprel 24 ka Spain. Ọ ga-ekwe omume ịzụta ya na Xiaomi, ụlọ ahịa Amazon, yana ụlọ ahịa ndị ọzọ dịka Worten, MediaMarkt, El Corte Inglés ma ọ bụ Phone House, n'etiti ndị ọzọ, dị ka akara ahụ gosipụtara.
Na nke a, ụdị a nke Xiaomi Mi 9 SE na ulo oru na onu ahia nke 399 euro, dị ka ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya kwadoro. Obere ọnụ, ma yana ezi uru maka ego, nke doro anya na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ nke nnukwu mmasị maka ndị na-eri ihe na Spain.
Na nkenke, ekwentị nwere ihe niile iji nwee ihe ịga nke ọma ma bido izu ole na ole mgbe Mi 9 gasịrị, nkenke pụtakwara maka nnukwu ego ya na Spen. Ya mere, a ga-enwe ihe ị ga-ahụ otu ndị ahịa si enweta na Spain nke a Xiaomi Mi 9 SE. Kedu ihe ị chere banyere ekwentị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » A na-eme Xiaomi Mi 9 SE na Spain